Bara fitaterana-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Our Services>Mavesatra>Fitaterana entana
(M) Gross Weight
(MT) Cargo hatch size
Ho an'ireo cargos misy mihoatra ny 5m na saika mandalo eny amin'ireo tetezana. Izy ireo dia mety amin'ny fitazonana fiara fitaterana mankany anaty rano avy any anaty rano na manatitra avy any anaty rano mankany anaty ranomasina amoron-tsiraka ary miova mivantana amin'ny sambo an-dranomasina.
Eny tokoa, misy làlan-tsambo mpanafatra mavesatra entana any Leshan port, seranan'i Yibin, ary seranan'i Luzhou ao amin'ny faritany Sichuan. Ny Sohologistics dia hanome ny drafitra tsara indrindra ho an'ny fitaterana entana mavesatra ho an'ny mpanjifantsika.
Mandra-pahoviana no hijanona ao amin'ny seranan'i Leshan, seranan'i Yibin, seranan'i Luzhou ka hatramin'ny faran'ny Shanghai Luojing?